Mazuva ano, tichagovana nevadzidzisi mapeji anozivikanwa zvikuru emashizha nebhasiki, iyo inowanzobatsira makadzikadzi wese kugadzirira imba yezororo kana kudya kwemanheru.
Sara rinofadza uye yakawanda nebasil, tomato uye mozzarella zvechokwadi ichakutora kuti uende kuGreece, zvichiita kuti iwe ukanganwe nezvematambudziko uye unopera zvachose mukuravira kwahwo kusingakanganwiki.
Chiedza uye chakakosha saladhi nebasil uye tomate
tomato - 2 pcs;;
basil - kuravira;
Balsamic vhiniga - 1 tbsp. l.;
mafuta omuorivhi - 1 tbsp. l.;
munyu uye pepper - kuvira.
Isu tinosuka zvachose marata, tioma, tema midzi. Zvadaro bvisa gorosi rimwe nerimwe nehupamhi hwemamiriyoni mashanu. Zvadaro nenzira imwecheteyo tinocheka mozzarella. Kana uchida, unogona kushandisa imwe chezi, yakadai se feta, ricotta kana brynza .
Iye zvino tinoshambidza uye tinosvina bhayiki. Zvadaro kuenzanisira kumira panzvimbo dzendarama ye mozzarella uye tomate. Usati washumira, wedzisa munyu uye pepper, shandisa balsamic vhiniga uye ude neolivhi. Uye pakupedzisira, tinoshongedza mabiko edu nemishonga - saladhi nebasil uye mozzarella yakagadzirira!
Uye mumugwagwa tine imwewo nyore, asi inonaka uye inobatsira saladi. Zvinonhuhwirira magidhi uye hove huru hazvizosiyi munhu asina hanya. Ndosaka takasarudza kugovana nevadzidzi vedu chikafu chesadidhi nebasil uye tuna.
Inonaka saladi nebasil uye tuna
tanki makedheni - 1 anogona;
ChiBulgaria pepper - 100 g;
mafuta omuorivhi - 3 tablespoons;
Chinhu chokutanga ndechokudzikisa jisi kubva kune zvokudya zvinogadzirwa. Zvadaro gurisa zvakakwana magidhi nemiriwo uye dries. Tsvaga makomkoro akaiswa mumidzere. Shure kwaizvozvo, tomato inotemwa mumakumbo uye, kana ichidiwa, tinobvisa demo kuitira kuti muhari isiri yemvura. Zvadaro, tinobvisa pepper yeBulgaria kubva kumbeu uye kornevki, uye tinoiisa mumakumbo maduku. Zvadaro tinosuka gariki uye tinopedza kuidzikisa, kana kuipwanya negoriki. Iye zvino tinonyatsocheka mavara emucheka wepasi, usakanganwa kudonha mashizha maviri kuti afukidze saladhi yedu.
Zvadaro, tinoisa mukapu yakanaka yakakanyiwa masango, chiBulgaria pepper, tomate, garlic, basil uye tuna. Mushure mezvo, tinorora chikafu nemafuta emuorivhi, munyu uye pepper. Gadzirai zvinyoro uye pakupedzisira, zvipfekedze saladi nemiti yemapine uye matavi ebasil.
Dhungwa kubva kuCottage cheese
Beetroot saladi - mapepa anonaka uye ane hutano nokuda kwemavhitamisi yakawanda
Mushroom akaomeswa - mapeji anonaka zvikuru muvheni, microwave uye multivark
Rabbit muchoto mujasi
Nzombe nemapatati muhanu
Zucchini ine nyama yakabikwa - ndiyo yakanakisisa mapeji ezvokudya zvepakutanga kwezuva rimwe nerimwe
Zvokudya kubva sipinashi
Bhuku rehadha - recipe
Rupire peji neapuro
Cutlets kubva pork
Braised hove nemiriwo
Mbewa yakabikwa - iyo yakanakisisa mapepipes nokuda kwezvokudya zvakagadzirwa zvinobva mushwa
Paruwa dzeNational Zealand
Bvudzi rinosuka kumba
Cerebranic syndrome muvana
Mafuta anokosha emon kune chiso
Inofadza sei kutora huku?
Kukurumidze kudzoka sei pakuberekwa?
Vakadzi vemazhizha ezhizha azere
Nzira yekufikira chinangwa?
Nzira yekuchenesa sei midziyo yeuropi nemishonga yevanhu?
Midhi mikirati - mafashoni emitambo ye 2016
Dhava yemiti yakabikwa mukaka wakabikwa
Chikwata chechikwata neine maoko
Nzira yekunamatira sei wallpaper pamusoro pedenga?
Nzira yekufukidzira micheche yakakura yemaapuro sei munguva yechando?
Psychology yebhizimisi kukurukurirana